Ogaden News Agency (ONA) – Qoomiyada Canfarta oo Kacdoon Xoogan Wada.
Qoomiyada Canfarta oo Kacdoon Xoogan Wada.
Posted by Dulmane	/ August 11, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Samara ee xarunta Gobolka Canfarta ayaa sheegaya in guud ahaan Gobolku uu kujiro xaalad daganaansho la’aan iyo kacdoon shacab ah, kadib faragalin qaawan oo ay wali kuhayso kooxdii TPLF ee talada xooga lagaga qaatay.
Sida xogta aan kuhelayno dhalinta Gobolka Canfarta oo aad u abaabulan ayaa lasheegayaa in ay isusoo baxyo waawayn kuqabteen meelo badan oo Gobolka Canfarta ah gaar ahaa magaalada caasimada ah ee Samara, waxaana lasheegayaa in ay dhalintu kasoo horjeedaan faragalinta qoomiyada Tigreega.
Saraakiisha TPLF ee wali saxada siyaasada kujira ayaa lasheegayaa in ay halgan ugu jiraan sidii ay xulufo ugu heli lahaayeen qoomiyada Oromada iyo xisbigeeda talada lawareegay ee OPDO, kuwaas oo wiiqay awoodii Tigreega.
Dhalinta iyo siyaasiyiinta Canfarta ayaa dhankooda xasuusan dhibaatooyinkii lixaadka lahaa ee kooxda TPLF ay shacabka dulman ee Canfarta ugaysatay mudadii 27da sano ahayd ee talada wadanka ay xooga kuhaysteen, waxayna Canfartu bilowday halgan dhinaca siyaasada ah oo Tigreega ay dhulkooda kaga sifaynayaan.
Dhinaca kale qoomiyada Canfarta oo kamid ah dadka lagu gumaysto wadanka Itoobiya ayaa aad uga taxadaraysa taageerada kooxda OPDO iyo qoomiyada Oromada oo umuuqda in ay badaleen oo kaliya qoomiyada dadka iyo dalka lahadhay ee Tigreega.
Dhinaca kale qoomiyada Oromada ayaa qoomiyadaha kale ee Itoobiya kuqasbaysay in ay xukunkooda si dhab ah u hoos yimaadaan waxayna Oromadu weerar xoogan kuqaaday maamulkii maqaarsaarka ahaa ee Soomaalida ee Jigjiga fadhiyay, kaas oo awalba kabo qaad u ahaa kooxdii TPLF.